Apple Tarisa pfungwa ine dhizaini yakafanana neiyo iPhone 12 | Ndinobva mac
Apple Tarisa pfungwa ine dhizaini yakafanana neiyo iPhone 12
Ignacio Sala | | Apple Watch, Rumo
Pfungwa, pfungwa, uye pane dzakawanda nguva, ivo vari mberi kwenguva yavo, asi zvisiri nguva dzose. Kwemakore mazhinji takaona pfungwa dze iPhone dzisina mafuremu, aine masikirini kumativi ese maviri (uye kunyangwe kumashure), magadzirirwo anoenderana neremangwana riri kure. Nekudaro, isu tinowanawo zvimwe zvinonzwisisika pfungwa senge iyo yatinokuratidza nhasi.
Mugadziri Wilson Nicklaus (@ Wilson_boi_101) akatumira paakaundi yake yeTwitter pfungwa dzinoverengeka dzekuti anofungidzira sei chizvarwa chinotevera cheApple Watch, dhizaini yakajeka yakafuridzirwa neyeiyo nyowani iPhone 12 inogarwa nhaka kubva kune iyo Pro Pro renji ine mativi akapetana.
Apple yakaunza iyi dhizaini nekumisikidzwa kwePad Pro mu2018, dhizaini ine mativi akapetana. senge iyo inowanikwa muiyo iPhone 4 uye iPhone 5. Kunyangwe parizvino pasina humbowo hunonongedza shanduko mukugadzirwa kweApple Watch, Wilson Nicklaus akagadzira dhizaini iyo, kutaura chokwadi, inokwezva, chimwe chinhu ndechekuti inoshanda.
Uye ini ndoti zvinoshanda, nei uine sandara kumucheto rakanamatira pachiuno hariite kunge rakasununguka. Isu tinongofanirwa kutarisa kumawachi agara achisvika pamusika, iwo ese ane akakomberedza micheto, nekuda kwekunyaradzwa kwavanopa kana vachipfeka vachisangana neruoko.
Nekutanga kweApple Watch Series 4 muna 2018, Apple yakagadzirisa dhizaini yayo kuwedzera skrini hombe kuchengeta dhizaini imwechete. Iyo inogona kunge iri nguva yakakodzera yekumutsiridza dhizaini nekushandisa iyo imwechete iyo yanga yaunzwa neiyo Pro Pro.
Iyi pfungwa ichaona chiedza here? Ini pachangu ndingati kwete, nekuda kwekusagadzikana kwekuti dhizaini dhizaini yemakona yaizokonzeresa pachiuno, asi hazvireve kuti pfungwa iyi haina kunaka.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Rumo » Apple Tarisa pfungwa ine dhizaini yakafanana neiyo iPhone 12
Iyo Apple Care + yeiyo nyowani AirPods Max ye € 59 chete
Inovimbika encrypts uye inochengeta ako Mac mafoto uye mavhidhiyo akachengeteka kubva kune vausingazive